WAR DEG DEG AH-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo war cusub ku dhawaaqay – Puntland News
Home 2017 October 12 Somali News WAR DEG DEG AH-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo war cusub ku dhawaaqay
October 12, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 2
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda maalinta calanka, isagoo baaq u diray dadka Soomaaliyeed.
“Maanta oo ah 12 October, waxay ku asteeysan tahay maalintii ugu horreeysay ee Calankeenna Soomaaliyeed gayiga laga taagay, Sannadkii 1954tii. Waa maalin inaga mudan xusuus iyo weyneeyn sidaa darteed, waxaan dhammaan Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeynayaa maalintaan qiimaha innoo leh..” ayuu yiri Xasan Sheekh oo farriin soo diray.
Wuxuu intaas ku daray in Calanka ay naftooda u soo hureen halyeeyo Soomaaliyeed, loona baahan yahay in muhiimadiisa dhowrno islamarkaana ilaalino, “Waa inaan kana shaqeeyno Qarannimada iyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed…” ayuuna sii raaciyay.
2 thoughts on “WAR DEG DEG AH-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo war cusub ku dhawaaqay”
mohamed sulub October 12, 2017 at 2:57 pm · Edit
waxa lahuba madaxweynihi hoore ee somaliya xassan,sh.maxamuud in uu dhamey midka hader talada wadanka haya ee farmajo,in kasto xassan laftigisu shido badna waxuu dhamey midka hader mesha jooga ee farmajo laleyahay.
omar a mohamed October 12, 2017 at 8:36 pm · Edit
Xassan shiikh haduu wadani yahay qiime calan yaqaano xaa isaga iyo lacagtiisii qurba ku qasbey isagoo madaxweyne ka noqdey wadanka?